8. Kuqondwa kanjani ukuthi uKristu uyiqiniso, indlela nempilo? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
“Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo ekuqaleni wayenoNkulunkulu” (Johane 1:1-2).
“Futhi uLizwi waba yinyama, futhi wahlala phakathi kwethu … egcwele umusa neqiniso” (Johane 1:14).
“Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila: akekho oza kuBaba, ngaphandle kwami” (Johane 14:6).
“Amazwi engiwasho kini, angumoya, futhi awukuphila” (Johane 6:63).
Iqiniso livela emhlabeni wabantu, kodwa iqiniso kubantu ledluliselwa uKristu. Lisuka kuKristu, okusho ukuthi kuNkulunkulu uqobo, futhi umuntu angelithole.
Kucashunwe “Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
“Ekuqaleni kwakukhona uLizwi, futhi uLizwi wayenoNkulunkulu, futhi uLizwi wayenguNkulunkulu, futhi uLizwi waba yinyama.” Lo (umsebenzi wokuvela kukaLizwi enyameni) umsebenzi uNkulunkulu azowuqeda ezinsukwini zokugcina, futhi yisahluko sokugcina sohlelo Lwakhe lonke lokuphatha, ngakho-ke uNkulunkulu kumele eze emhlabeni azoveza amazwi Akhe enyameni.
Manje, uNkulunkulu ufika ezokwenza umsebenzi hhayi esemzimbeni kamoya kodwa esemzimbeni ojwayelekile. Akuyiwo kuphela umzimba kaNkulunkulu wokuba senyameni kwesibili, kodwa futhi umzimba uNkulunkulu abuya ekuwo. Uyinyama ejwayelekile kakhulu. Kuye, awukwazi ukubona into ehlukile kweyabanye, kodwa ungathola Kuye amaqiniso ongakaze uwezwe ngaphambilini. Le nyama engabalulekile iwukuhlanganiswa kwawo wonke amazwi eqiniso avela kuNkulunkulu, lokho okwenza umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kanye nokuvezwa kwaso sonke isimo sikaNkulunkulu ukuze umuntu agcine esazi. Awuzange ube nesifiso esikhulu sokubona uNkulunkulu osezulwini? Awuzange ube nesifiso esikhulu ukuqonda uNkulunkulu ezulwini? Awuzange ufise kakhulu ukubona isiphetho sesintu? Uzokutshela zonke lezi zimfihlo okungekho muntu oke wakwazi ukukutshela zona, futhi uzokutshela namaqiniso ongawaqondi. Uyisango lakho lokungena embusweni, nomqondisi wakho ekungeneni enkathini entsha. Inyama ejwayeleke kanjalo iqukethe izimfihlakalo ezingenakwaziwa. Izenzo Zakhe zingaqondakali kuwe, kodwa umgomo wawo wonke umsebenzi awenzayo wenele ukuthi ubone ukuthi akayona nje inyama njengoba umuntu ekholwa. Ngoba umele intando kaNkulunkulu kanye nokunakekela okukhonjiswa uNkulunkulu esintwini ezinsukwini zokugcina. Nakuba ungawezwa amazwi awakhulumayo okungathi ashukumisa amazulu nomhlaba noma ubone amehlo Akhe njengamalangabi alangukayo, futhi nakuba ungakuzwa ukuqondisa kwenduku yensimbi Yakhe, ungezwa emazwini Akheulaka lukaNkulunkulu futhi wazi ukuthi uNkulunkulu ukhombisa ububele esintwini; ungasibona isimo esilungile sikaNkulunkulu nokuhlakanipha Kwakhe, futhi ngaphezu kwalokho, ubone ukukhathazeka nokunakekela uNkulunkulu anakho ngesintu. Umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ukuvumela umuntu ukubona uNkulunkulu osezulwini ephila phakathi kwabantu emhlabeni, futhi nokwenza umuntu ukuthi azi, alalele, ahloniphe, futhi athande uNkulunkulu. Yingakho ebuyele enyameni okwesibili. …
… Konke onakho namhlanje kungenxa yale nyama. Yingoba uNkulunkulu uyaphila enyameni yingakho unethuba lokuphila. Yonke le nhlanhla itholakale ngenxa yalo muntu ojwayelekile. Hhayi lokhu kuphela, kodwa ekugcineni zonke izizwe zizomkhonza lo muntu ojwayelekile, ziphinde zibonge futhi zilalele lo muntukazana. Ngoba Nguye olethe iqiniso, ukuphila kanye nendlela yokusindisa isintu sonke, nokudambisa ukungqubuzana phakathi kukaNkulunkulu nomuntu, osondelanisa uNkulunkulu nomuntu kakhudlwana, futhi oxhumanisa imicabango phakathi kukaNkulunkulu nomuntu. Nguye futhi oselethe udumo olukhulu nakakhulu kuNkulunkulu. Akafanele umuntu ojwayelekile njengaloukuthenjwa nokuthandwa nguwe? Ayifanele inyama ejwayelekile njengale ukubizwa ngoKristu? Ngeke kwenzeke ukuthi umuntu ojwayelekile onjalo abe ukuvezwa kukaNkulunkulu phakathi kwabantu? Akakufanele umuntu onjalo osiza isintu ukuthi siphephe enhlekeleleni ukuthandwa nokugonwa nguwe? Uma ulahla amaqiniso aphuma emlonyeni Wakhe futhi unyanya ukuba khona Kwakhe phakathi kwenu, siyoba yini isiphetho sakho?
Kucashunwe “Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Kodwa futhi ngumuntu ojwayelekile ocashe phakathi kwabantu owenza umsebenzi omusha wokusisindisa. Akasicaciseli lutho, akasitsheli nokuthi yini ayizele. Umane wenza umsebenzi ahlose ukuwenza ezigabeni Zakhe, futhi ngokuvumelana necebo Lakhe. Amazwi nezinto Zakhe kuyejwayeleka. Kusukela ekududuzeni, ekuzikhandleni, ekukhumbuzeni, kanye nokwexwayisa, kuya ekusoleni nasekusiyaleni; kusukela ephimbweni elinomusa kuye emazwini anolaka nanamandla amakhulu—onke anobubele nokukhathazeka kumuntu. Konke akushoyo kuhlaba esikhonkosini ngezimfihlo ezithukuswe kithi, amazwi Akhe ahlaba izinhliziyo zethu, ahlaba umoya wethu, asishiye sishaywa amahloni futhi sihlazekile. …
Engaziwa kithi, lo muntu ongabalulekile usiholele ezigabeni zomsebenzi kaNkulunkulu. Sidlula ezilingweni ezingenakubalwa, ekusolweni okungabaleki, futhi savivinywa ukufa. Sifunda ngokulunga namandla amakhulu esimo sikaNkulunkulu, futhi uthando Lwakhe nobubele, kuyawazisa amandla amakhulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu, kuyalubona uthando lukaNkulunkulu, nesifiso esijulile sikaNkulunkulu sokusindisa umuntu. Emazwini alo muntu ojwayelekile, siye sazi isimo nesiqu sikaNkulunkulu, saqonda intando kaNkulunkulu, sazi isiqu nokwakheka komuntu, sabona nendlela yokusindiswa nokupheleliswa. Amazwi Akhe asenza sife, futhi asenza siphinde sizalwe; amazwi Akhe asilethela induduzo, aphinde asishiye sinecala, futhi sinomqondo wokwazisa; amazwi Akhe asilethela injabulo nokuthula, kodwa futhi nobuhlungu obukhulu. Ngezinye izikhathi sifana nezimvu ezihlatshwayo ezandleni Zakhe; kwezinye sifane nama-apula emehlweni Akhe, futhi sijabulele uthando; ngezinye izikhathi sifana nezitha Zakhe, siyiswa emlotheni ngethukuthelo Yakhe esemehlweni Akhe. Siyisintu esisindiswe Nguye, siyizimpethu emehlweni Akhe, futhi siyizimvu ezilahlekile azifuna ubusuku nemini. Unomusa kithi, uyasikhathalela, uyasiphakamisa, uyasiduduza futhi asigqugquzele, uyasiqondisa, uyasikhanyisela, uyasisola futhi asiyale, aze ngisho asiqalekise. Ukhathazeka ngathi ubusuku nemini, uyasivikela ubusuku nemini, akalokothi asishiye, usinakekela ngazo zonke izindlela akhokhe noma yiliphi inani. Phakathi kwamazwi ale nyama engatheni najwayelekile, siye sajabulela ukuphelela kukaNkulunkulu, futhi sabona ikusasa uNkulunkulu asibekele lona.
Izwi likaNkulunkulu liyaqhubeka, futhi usebenzisa izindlela eziningi ukuze asitshele okufanele sikwenze futhi embule izwi lenhliziyo Yakhe. Amazwi Akhe anamandla okuphila, asibonisa indlela okufanele sihambe ngayo, futhi asenza siqonde iqiniso. Siqala ukusondelana namazwi Akhe, siqala ukugxila endleleni akhuluma ngayo, bese siqala ukuthanda izwi lenhliziyo Yakhe ngalo muntu omangalisayo. Uzikhandla ngokukhulu ukucophelela ngenxa yethu, aqwashe futhi angafuni ukudla ngenxa yethu, akhale ngenxa yethu, alile ngenxa yethu, agule ngenxa yethu, ahlazwe ngenxa yekusasa nensindiso yethu, futhi inhliziyo Yakhe iyopha ikhale izinyembezi ngenxa yokuba ndikindiki kwethu nokuhlubuka. Ubuntu obunjalo nezinto Zakhe kungaphezu komuntu ojwayelekile, akekho umuntu okhohlakele ongaba nakho. Unokubekezela okungekho muntu omunye onakho, futhi asikho isidalwa esinothando analo. Akekho omunye ngaphandle Kwakhe ongazi imicabango yethu, noma aqonde indawo nesiqu sayo ngaleyo ndlela, noma ahlulele ukuhlubuka nokukhohlakala kwesintu, noma ekhuluma nathi futhi esebenze phakathi kwethu ngenxa kaNkulunkulu wamazulu. Akekho ngaphandle Kwakhe ongaba negunya, ukuhlakanipha, nesithunzi sikaNkulunkulu; isimo sikaNkulunkulu nalokho anakho nayikho ukuqhakambisa ngokuphelele. Akekho ngaphandle Kwakhe ongasibonisa indlela nokukhanya. Akekho ngaphandle Kwakhe ongembula izimfihlakalo uNkulunkulu angakaze azambule kusukela ekudalweni kuze kube manje. Akekho ngaphandle Kwakhe ongasisindisa ekugqilazweni uSathane nasesimweni sethu esikhohlakele. Umelela uNkulunkulu, embule izwi lenhliziyo kaNkulunkulu, nezikhuthazo zikaNkulunkulu, namazwi esahlulelo sikaNkulunkulu kuso sonke isintu. Uqale inkathi entsha, waletha amazulu amasha nomhlaba omusha, umsebenzi omusha, wasilethela ithemba, waqeda ukuphila esididekile kukho, wasivumela ukuba siyibambe ngokugcwele indlela eya ensindisweni. Usinqobile, wazuza nezinhliziyo zethu. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, izingqondo zethu ziqaphile, futhi umoya wethu uvuselelwe: Lo muntu ojwayelekile, ongabalulekile, ophila phakathi kwethu futhi ebesilokhu simphika—akayona yini iNkosi uJesu, ehlale isemicabangweni yethu, esiyilangazelela ubusuku nemini? Nguye! Nguye ngempela! UnguNkulunkulu wethu! Uyindlela, neqiniso nokuphila! Usivumele ukuba siphinde siphile, sibone ukukhanya, futhi wenze izinhliziyo zethu zangadideka. Sesibuyile ekhaya likaNkulunkulu, sibuyile esihlalweni Sakhe sobukhosi, sesiNaye, sizibonile izimbangi Zakhe, salubona nohambo olusihlalele.
Kucashunwe “Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
ULizwi ube yinyama nokuthi uMoya weqiniso ubonakele enyameni—ukuthi lonke iqiniso, ukuphila, nendlela kube yinyama, nokuthi uMoya uye wafika emhlabeni njengenyama. Nakuba kungajwayelekile, lokhu kubukeka kwehlukile ekuzalweni ngoMoya Ongcwele, kulo msebenzi uyakwazi ukubona ngokucacile ukuthi uMoya Ongcwele ubonakele enyameni, nokuthi uLizwi ubonakele enyameni, nokuthi uyakwazi ukuqonda incazelo yangempela yamazwi: Ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu. Ngaphezu kwalokho, kumele uqonde ukuthi amazwi anamuhla anguNkulunkulu, futhi kumele uwabone amazwi eba yinyama. Lobu yibona bufakazi obukhulu ongaba nabo. Lokhu kufakazela ukuthi unolwazi lweqiniso ngolwazi lukaNkulunkulu eba yinyama—awukwazi ukumazi nokumehlukanisa kuphela, kodwa uyazi ukuthi indlela ohamba ngayo namuhla yindlela yokuphila, nendlela yeqiniso. uJesu wenza isinyathelo somsebenzi owagcwalisa kuphela ubuqu bokuthi “uLizwi wayekuNkulunkulu”: Iqiniso lokuthi uNkulunkulu wayekuNkulunkulu, nokuthi uMoya kaNkulunkulu wawusenyameni futhi ungasuki kuYe, okungukuthi, inyama kaNkulunkulu osenyameni yayinoMoya kaNkulunkulu, okungubufakazi obuqand’ikhanda bokuthi ukuba kukaJesu enyameni kwakungokokuqala uNkulunkulu esenyameni. Lesi sigaba somsebenzi sagcwalisekisa incazelo yangempela “kaLizwi eba yinyama,” saba nencazelo ejulile yokuthi “uLizwa wayekuNkulunkulu, uLizwi wayenguNkulunkulu,” futhi sikwenza uwakholelwe ngokuqinile amazwi athi “Ekuqaleni wayekhona uLizwi.” Okungukuthi, ngesikhathi kudalwa uNkulunkulu wayenamazwi, amazwi aKhe ayenaye engasuki kuYe, kanti inkathi yokugcina yenza kucace bha ngamandla negunya lamazwi aKhe, avumele abantu babone wonke amazwi Akhe—ukuzwa wonke amazwi aKhe. Unjalo umsebenzi wesigaba sokugcina. Kumele nizazi lezi zinto zonke. Akukona ukwazi inyama, kodwa ukwazi inyama noLizwi. Lokhu yilokhu okumele nibe ngofakazi bakho, lokhu okumele wonke umuntu akwazi.
Kucashunwe “Isenzo (4)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Amazwi Ami aliqiniso elingasoze laguquka naphakade. Ngiyilowo onikeza ukuphila kumuntu futhi Yimi kuphela oqondisa isintu. Ukubaluleka kanye nencazelo yamazwi Ami akuncikile ekutheni, ngabe ayemukeleka noma ayemukelwa yisintu, kodwa ngobukhona bamazwi Ami uqobo. Noma ngabe akukho namunye umuntu kulomhlaba ongawemukela amazwi Ami, isisindo samazwi Ami kanye nosizo lwawo esintwini alusoze lwalinganiswa muntu. Ngakho-ke, uma Mina ngibhekene nabantu abaningi abangivukelayo, abangiphikayo, noma labo abawedelelayo amazwi Ami, isinqumo sami sithi: Makuthi isikhathi kanye namaqiniso abe ngofakazi Bami futhi akhombise ukuthi amazwi Ami aliqiniso, indlela kanye nokuphila. Makakhombise ukuthi konke engikushilo kulungile, nokuthi ayilokho umuntu okumele agcwaliswe yikho, kanye, nangaphezu kwalokho, lokho umuntu okumele akwemukele. Ngiyovumela bonke labo abangilandelayo bazi leliqiniso: Labo abangakwazi ukwemukela amazwi Ami ngokugcwele, labo abangakwazi ukwenza amazwi Ami, labo abangakwazi ukuthola inhloso emazwini Ami, kanye nalabo abangakwazi ukuthola insindiso ngenxa yamazwi Ami, yilabo abahlulelwe ngamazwi Ami, futhi, ngaphezu kwalokho, abalahlekelwe yinsindiso Yami kanti nentonga Yami ayisoze yasuka kubo.
Kucashunwe “Kumele Ubhekisise Izenzo Zakho” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
(Isiqephu Sezwi LikaNkulunkulu Esikhethiwe)
Indlela yokuphila akusiyo into engaba ekanoma ubani, futhi ayitholwa yibo bonke abantu kalula. Lokhu kwenziwa ukuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu kuphela, okusho ukuthi, uNkulunkulu kuphela onesiqu sokuphila, ayikho enye indlela yokuphila ngaphandle kukaNkulunkulu Uqobo, ngakho-ke uNkulunkulu kuphela owumthombo wokuphila, futhi uwumthombo wamanzi okuphila ahlala egeleza. Kusukeka ngesikhathi edala umhlaba, uNkulunkulu wenze umsebenzi omningi obandakanya ukubaluleka kokuphila, wenze umsebenzi omningi onika umuntu ukuphila, futhi wakhokha inani elikhulu ukuze umuntu aphinde abe nokuphila, ngoba uNkulunkulu Uqobo uwukuphila okungunaphakade, futhi uNkulunkulu Uqobo uyindlela umuntu avuswa ngayo. UNkulunkulu uhlala ekhona enhliziyweni yomuntu, futhi uphila phakathi komuntu ngaso sonke isikhathi. Nguye obeqhubekisa ukuphila komuntu, isisekelo sobukhona bomuntu, futhi utshale lukhulu ukuze umuntu aphile emuva kokuzalwa. Wenza umuntu azalwe kabusha, futhi wenza akwazi ukuphila endimeni nendima okumele abe kuyo. Sibonga amandla Akhe, kanye namandla Akhe okuphila angeshatshalaliswe, umuntu uphile izizukulwane eziningi, kukho konke amandla kaNkulunkulu yiwo akade enza ukuthi umuntu aqhubeke nokuba khona, futhi uNkulunkulu ukhokhe inani umuntu ojwayelekile angakaze alikhokhe. Amandla empilo kaNkulunkulu angachuma kunanoma amaphi amandla, phezu kwalokho, edlula wonke amandla. Ukuphila Kwakhe kungunaphakade, amandla Akhe makhulu ngokwedlulele, futhi amandla Akhe okuphila awehlulwa yinoma yini edaliwe noma amandla esitha. Amandla kaNkulunkulu akhona, futhi akhanyisa bha, noma ngabe yisiphi isikhathi noma indawo. Izulu nomhlaba kungaba nezinguquko ezinkulu, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kuhlala kufana. Zonke izinto ziyedlula, kodwa ukuphila kukaNkulunkulu kulokhu kumile, ngoba uNkulunkulu ungumthombo wobukhona bazo zonke izinto, futhi ungumsuka wobukhona bazo. Ukuphila komuntu kuvela kuNkulunkulu, izulu likhona ngenxa kaNkulunkulu, futhi ubukhona bomhlaba busuka emandleni okuphila kukaNkulunkulu. Akukho okubalulekile okungadlula ubukhulu bukaNkulunkulu, futhi akukho okunamandla okuphuma emandleni okuphathwa nguNkulunkulu. Ngale ndlela, ngisho noma bangobani, bonke abantu kumele bathobele ukubusa kukaNkulunkulu, bonke abantu kumele baphile ngaphansi kokulawulwa uNkulunkulu, futhi akekho umuntu ongaphunyuka elulawuleni Kwakhe.
Mhlawumbe, manje, ufisa ukuthola ukuphila, noma mhlawumbe ufisa ukuthola iqiniso. Noma ngabe yikuphi, ufisa ukuthola uNkulunkulu, ukuthola uNkulunkulu ongancika kuye, futhi ongakunika ukuphila okuyingunaphakade. Uma ufisa ukuthola ukuphila okungunaphakade, kumele uqale uqonde umthombo wokuphila ingunaphakade, futhi kumele uqale wazi ukuthi uNkulunkulu ukuphi. Bese ngishilo ukuthi uNkulunkulu kuphela ongukuphila okungashintshi, futhi uNkulunkulu kuphela onendlela yokuphila. Njengoba ukuphila Kwakhe kungashintshi, ngakho kungokwengunaphakade; njengoba kuwuNkulunkulu kuphela indlela yokuphila, ngakho uNkulunkulu Uqobo uyindlela yokuphila okuphakade. Njengoba kumele uqale uqonde ukuthi uNkulunkulu ukuphi, nokuthi le ndlela yokuphila ingunaphakade itholakala kanjani. Manje masifunde ngalezi zindaba ezimbili ngokwahlukana.
Uma ufisa ukuthola indlela eya ekuphileni kwaphakade ngokweqiniso, futhi uma ukulambele ngokweqiniso ngenkathi ukufuna, kumele uqale ngokuphendula lo mbuzo: Ukuphi uNkulunkulu namuhla? Mhlawumbe uzophendula ngokuthi uNkulunkulu uhlala ezulwini, vele—ubengeke Aphile ekhaya lakho, angithi? Mhlawumbe ungathi, vele uNkulunkulu uphila phakathi kwazo zonke izinto. Noma ungathi uNkulunkulu uphila enhliziyweni yomuntu ngamunye, noma uNkulunkulu usemhlabeni womoya. Angikuphiki konke lokhu, kodwa kumele ngicacise le ndaba. Akusilo iqiniso ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu uphila enhliziyweni yomuntu, kodwa futhi akusilo iphutha ngokugcwele. Lokhu kubangelwa ukuthi, phakathi kwabantu abakholelwa kuNkulunkulu kukhona labo abakholwa ngokweqiniso kanye nalabo abakholwa ngokungeyikho okweqiniso, kukhona labo abagunyazwa uNkulunkulu kanye nalabo angabagunyazi, kukhona labo abamuthokozisayo kanye nalabo abazondayo, futhi kunalabo abalungisayo kanye nalabo abachithayo. Ngakho ngithi uNkulunkulu uphila ezinhliziyweni zabantu abambalwa, futhi labo bantu akungatshazwa ukuthi yilabo abakholelwa kuNkulunkulu ngokweqiniso, labo abagunyazwe uNkulunkulu, labo abamthokozisayo, kanye nalabo abalungisisayo. Kukhona labo abaholwa uNkulunkulu. Njengoba beholwa uNkulunkulu, bangabantu asebezwile futhi ababone indlela kaNkulunkulu yokuphila okungunaphakade. Labo abakholelwa kuNkulunkulu ngendlela engasilo iqiniso, labo abangagunyazwa uNkulunkulu, labo abamcasulayo uNkulunkulu, labo abachithwa uNkulunkulu—nakanjani bayochithwa uNkulunkulu, nakanjani bazosala bengenayo indlela yokuphila, futhi nakanjani bayohlala bengazi ukuthi uNkulunkulu ukuphi. Kolunye uhlangothi, labo uNkulunkulu ahlala ezinhliziyweni zabo bayazi ukuthi ukuphi. Bangabantu uNkulunkulu abanike indlela yokuphila ingunaphakade, futhi yibo abalandela uNkulunkulu. Sewuyazi manje ukuthi uNkulunkulu ukuphi? UNkulunkulu usenhliziyweni yomuntu futhi useceleni nomuntu. Akekho emhlabeni womoya kuphela, futhi phezu kwakho konke, kodwa muningi kakhulu emhlabeni umuntu aphila kuwo. Ngakho ukufika kwezinsuku zokugcina kufike ezigabeni zomsebenzi kaNkulunkulu kwangena endaweni entsha. UNkulunkulu ungaphezu kwazo zonke izinto emhlabeni, futhi Nguye oyisisekelo somuntu enhliziyweni yakhe, futhi phezu kwalokho, ukhona phakathi komuntu. Yingale ndlela kuphela angaletha indlela yokuphila esintwini, futhi anike umuntu indlela yokuphila. UNkulunkulu uze emhlabeni, futhi uphila phakathi kwabantu, ukuze umuntu athole indlela yokuphila, futhi ukuze umuntu abe khona. Khona manjalo, uNkulunkulu ufuna ukulawula zonke izinto emhlabeni jikelele, ukuze zihambisane nokuphatha Kwakhe phakathi kwabantu. Ngakho, uma wazisa imfundiso yokuthi uNkulunkulu usezulwini nasenhliziyweni yomuntu, kube awulazisi iqiniso lobukhona bukaNkulunkulu phakathi komuntu, kusho ukuthi ngeke uphinde ukuthole ukuphila, futhi ngeke uphinde ulithole iqiniso.
UNkulunkulu Uqobo ungukuphila, neqiniso, futhi ukuphila Kwakhe neqiniso kuyahambisana. Labo abehluleka ukuthola iqiniso abasoze bakuthola ukuphila. Ngaphandle kokuqondiswa, ukusekelwa, kanye nokuhlinzeka ngeqiniso, uyothola amagama nje, nezimfundiso, kanti, ngaphezu kwakho konke, ukufa. Ukuphila kukaNkulunkulu kuhlala kukhona, futhi iqiniso Lakhe nokuphila kuyahambisana. Uma wehluleka ukuthola umthombo weqiniso, kusho ukuthi awusoze wathola ukudla kokuphila; uma wehluleka ukuthola isihlinzeko sempilo nakanjani awuzukuba neqiniso, futhi kuqhelelene kakhulu nemicabango nokuqonda, umzimba wakho uwonke awuzukuba yilutho ngaphandle kwenyama, inyama yakho enuka phu. Yazi ukuthi amagama asezincwadini awabalwa njengokuphila, izincwadi zomlando ngeke zithathwe ngokuthi ziyiqiniso, futhi izimfundiso zakudala zingesebenze njengamazwi akhulunywa uNkulunkulu namuhla. Ngokuvezwa uNkulunkulu kuphela uma eseza emhlabeni futhi ephila phakathi komuntu okuyiqiniso, ukuphila, intando kaNkulunkulu, kanye nendlela Yakhe yamanje yokusebenza. Uma ungasebenzisa amarekhodi amazwi akhulunywe uNkulunkulu ezikhathini ezedlule namuhla, kusho ukuthi uwusomlando ovundulula okucashile, futhi indlela ephuma phambili yokukuchaza ukuthi ungungoti wamagugu omlando. Lokho kudalwa ukuthi uhlala ukholelwa emlandweni womsebenzi kaNkulunkulu awenza ngezikhathi esezadlula, ukholelwa esithunzini uNkulunkulu asishiya ngenkathi esebenza kubantu ngaphambilini, futhi ukholelwa endleleni uNkulunkulu ayinika abalandeli Bakhe ngezikhathi zangaphambilini. Awukholelwa endleleni yomsebenzi kaNkulunkulu wanamuhla, awukholelwa kulokho okumangalisayo okwenziwa uNkulunkulu namuhla, futhi awukholelwa endleleni yeqiniso elivezwa uNkulunkulu namuhla. Ngakho uyaziphuphela nje futhi uqhelelene nokuqhubekayo okuyinto engephikiswe. Uma manje usabambelele emazwini angenike umuntu ukuphila, ungumuntu oqinelwa yikhanda,[a] ngoba uzigodlile, unenkani yeselesele, uqinelwa ikhanda kakhulu awufuni nokucabanga!
UNkulunkulu waba inyama eyabizwa ngokuthi uKristu, futhi okuwuKristu okwazi ukunika abantu iqiniso elibizwa ngokuthi uNkulunkulu. Akukho okukhulu ngalokhu, ngoba uqukethe isiqu sikaNkulunkulu, futhi uqukethe isimo sikaNkulunkulu, kanye nobuhlakani emsebenzini Wakhe, umuntu angekuthole. Labo abazibiza ngoKristu, kepha bengakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, bangabakhohlisi. UKristu akasikho nje ukubonakaliswa kukaNkulunkulu emhlabeni, kodwa futhi uyinyama embethwe uNkulunkulu njengoba ephethe futhi eqedela umsebenzi Wakhe kubantu. Le nyama akusiyo leyo endawo yayo ingathathwa yinoma imuphi umuntu, kodwa yileyo engathwala umsebenzi kaNkulunkulu ngendlela egculisayo emhlabeni, futhi ibonakalisa isimo sikaNkulunkulu, futhi inika abantu ukuphila. Esikhathini esingatheni, labo abazenza uKristu bayowa, ngoba yize bethi banguKristu, akukho abanakho okuwumgogodla kaKristu. Ngakho ngithi ubuqiniso ngoKristu ngeke buchazwe umuntu, kodwa kuphendulwa futhi kunqunywe uNkulunkulu Uqobo. Ngale ndlela, uma ufuna ukuthola indlela yokuphila yangempela, kumele uqale ukwazise ngokuza emhlabeni futhi unika umuntu indlela yokuphila, futhi kumele uyazise ngezinsuku zokugcina ukuthi uza emhlabeni ukuzonika umuntu indlela yokuphila. Lokhu akusiyo into yakudala; yenzeka njengamanje.
UKristu wezinsuku zokugcina uletha ukuphila, futhi ukubekezela kanye nendlela yeqiniso engunaphakade. Leli qiniso liyindlela umuntu angathola ukuphila ngayo, futhi yiyo kuphela indlela umuntu ayokwazi uNkulunkulu ngayo futhi agunyazwe uNkulunkulu. Uma ungayifuni indlela yokuphila evela kuKristu wezinsuku zokugcina, kusho ukuthi awusoze wathola ukugunyazwa uJesu, futhi awusoze wafaneleka ukungena ngesango lombuso wezulu, ngoba ungunopopi kanye nesiboshwa somlando. Labo abalawulwa imithetho, ngamagama, futhi ababoshelwe umlando abasoze bathola ukuphila, futhi abasoze bakwazi ukuthola indlela yokuphila engunaphakade. Lokhu kwenziwa ukuthi konke abanakho kungamanzi ayizibhidi okulokhu kubanjelelwe kuwo izinkulungwane zeminyaka, esikhundleni samanzi ageleza esuka esihlalweni sobukhosi. Labo abangahlinzekwa ngamanzi okuphila bayohlala beyizidumbu ingunaphakade, beyizinto zokudlala uSathane, futhi bengamadodana asesihogweni. Pho-ke, bangakwazi ukubona uNkulunkulu? Uma uzama ukubambelela kokwakudala kuphela, uzama ukugcina izinto ngendlela eziyiyo ngokuma unganyakazi, futhi ungazami ukushintsha isimo, ulahle okwakudala, uma kunjalo awuyikuhlala ulwisana noNkulunkulu? Izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu zibanzi futhi zinkulu, njengamagagasi agelezayo kanye nokuduma kwezulu okugingqikayo—kepha uyahlala futhi ulinde ukubhujiswa ungenzi lutho, unamathele emikhubeni yakho futhi ungenzi lutho. Ngale ndlela, ungathathwa kanjani njengomuntu olandela ezinyathelweni zeWundlu? Ungakuveza kanjani ubulungiswa ngoNkulunkulu onaye owuNkulunkulu ohlala emusha futhi ongagugi? Futhi amazwi ezincwadi zakho eziqanda angakudlulisela kanjani esikhathini esisha? Angakuholela kanjani ukuthi ufune izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu? Futhi angakuyisa kanjani ezulwini? Okuphethe ezandleni amagama angakunika ukuthula kwesikhashana, hhayi amaqiniso angakunika ukuphila. Imibhalo oyifundayo iyilokho okungacebisa ulimi lwakho, ayiwona amazwi obuhlakani angakusiza ukuze wazi ngokuphila komuntu, ingasaphathwa eyezindlela ezingakuholela ekulungisisweni. Ingabe lokhu kushayisana akwenzi ubone isidingo sokuzihlolisisa? Ingabe akwenzi ukuthi uqonde izimfihlakalo eziqukethwe kukho? Ungakwazi yini ukuzisindisa ukuze ungene ezulwini uye kohlangana noNkulunkulu ngokwakho? Ngaphandle kokuza kukaNkulunkulu, ungaziyisa yini wena ezulwini ukuze uthokozele intokozo yomndeni noNkulunkulu? Ingabe usaphupha namanje? Ngiphakamisa ukuthi uyeke ukuphupha, ubheke ukuthi ubani osebenzayo manje, ukuthi ubani owenza umsebenzi wokusindisa abantu ngezikhathi zokugcina. Uma ungazi, ngeke uphinde ulithole iqiniso, futhi awusoze waba nokuphila.
Labo abafisa ukuthola ukuphila ngaphandle kokwethembela eqinisweni elikhulunywa uKristu bangabantu abangenangqondo kakhulu emhlabeni, futhi bayilabo abangayamukeli indlela yokuphila elethwe uKristu abalibele ukuphupha. Ngakho ngithi uma abantu bengamamukeli uKristu wezinsuku zokugcina bayohlala bezondwa uNkulunkulu unomphela. UKristu uyindlela yomuntu yokungena embusweni ngezikhathi zokugcina, abanye abangangakunaka. Akekho umuntu ongalungiswa uNkulunkulu ngaphandle kokudlula kuKristu. Uyakholwa nguNkulunkulu, futhi kumele wamukele amazwi Akhe futhi uhloniphe indlela Yakhe. Kumele ungacabangi nje ngokuthola izibusiso ngaphandle kokuthola iqiniso, noma ukwamukela okuhlinzeka ngokuphila. UKristu uza ngezinsuku zokugcina ukuze labo abakholelwa Kuye ngokweqiniso bakwazi ukuhlinzekwa ngokuphila. Umsebenzi Wakhe wenzelwa ukuqedela isikhathi esedlule futhi ungena kwesisha, futhi indlela okumele ithathwe yibo bonke abafuna ukungena esikhathini esisha. Uma wehluleka ukumazisa, futhi esikhundleni sokugxeka, ukuthuka, noma ukumkhaphela, kusho ukuthi nakanjani uyosha ingunaphakade, futhi awusoze wangena embusweni kaNkulunkulu. Ngoba uKristu ngokwakhe uyisibonakaliso soMoya oNgcwele, futhi ukubonakaliswa kukaNkulunkulu, loyo uNkulunkulu amethembe ukuthi uzokwenza umsebenzi Wakhe emhlabeni. Futhi ngithi uma wehluleka ukwamukela konke okwenziwa uKristu ngezinsuku zokugcina, wethuka uMoya oNgcwele. Isijeziso okumele sibhekane nalabo abathuka uMoya oNgcwele sicacele bonke abantu. Ngiyanitshela ukuthi uma niphikisa uKristu wezinsuku zokugcina, futhi Nimuphika, kusho ukuthi akekho umuntu ongakuthwalela umphumela walokho. Phezu kwalokho, kusukela ngalolu suku kuya phambili anizukuba nelinye ithuba lokuthola ukugunyazwa uNkulunkulu; noma ningazama ukuzikhulula, anisoze nabona ubuso bukaNkulunkulu. Ngoba aniphikisani nomuntu, aniphikisani nokuthile okudaliwe, kodwa uKristu. Ingabe uyawazi umphumela walokhu? Awenzanga iphutha elincane, kodwa wenze icala elesabekayo. Futhi ngeluleka bonke abantu abamelene neqiniso, noma abagxeka ngobudedengu, ngoba yiqiniso kuphela elingakunika ukuphila, futhi yiqiniso kuphela elingakwenza uzalwe kabusha futhi ubone ubuso bukaNkulunkulu.
Kucashunwe encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
a. Ucezu lokhuni olufile: isisho sesiShayina, esisho ukuthi “akanakusizakala.”
Okwedlule: 7. Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu?
Okulandelayo: 9. Ingabe ukuba senyameni kukaNkulunkulu ukuze enze umsebenzi wokwahlulela kuletha kanjani isiphelo senkolo yesintu ngalo Nkulunkulu ongakacaci kahle kanye nenkathi yokumnyama yokubusa kukaSathane?
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:“Yizwani omunye umfanekiso: Kwakunomninindlu othile, owatshala isivini, futhi wasibiyela ngothango, futhi...
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:“Laba bantu basondela kimi ngomlomo wabo, futhi bangidumisa ngezindebe zabo; kodwa inhliziyo yabo ikude...
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:“UFiliphu wathi kuye, Nkosi, sibonise uYihlo, futhi kusanele. UJesu wathi kuye, Isikhathi esingaka ngikanye...